२०७८ साल कुन राशि को लागि कस्तो ? हेर्नुहोस् बार्षिक राशिफल - Pradesh Hub
१ बैशाख २०७८, बुधबार १०:५४ प्रकाशित
वृद्धजनलाई सहयोग गर्नाले मानसिक शान्ति मिल्नेछ । शनिवार भैरवजी र मङ्गलवार गणेशजीको दर्शन, पूजा र आरधना गर्नाले ग्रह पीडा कम हुनेछ । प्रत्येक दिन निमुखा प्राणी तथा चराचुरुङ्गीलाई खानेकुरा दिनाले पनि भाग्यमा वृद्धि हुनेछ ।
यो वर्ष वृष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि सामान्य रहनेछ । शनि, राहु र गुरुले त्यति साथ नदिन सक्छ, त्यसैले ठूलो महत्त्वाकाङ्क्षा नलिनू र धैर्य गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ, तर जन्म कुण्डलीमा ग्रह बलियो छ भने शुभफल मिल्नेछ । कात्तिक पछि भने समय अनुकूल रहने र अधुरा कामहरू पूरा हुनेछन् । सामाजिक र राजनैतिक कार्यमा मन जानेछ । भौतिक सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुनेछ र मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउनेछ ।
यो वर्ष व्यापार तथा व्यवसायबाट अपेक्षित लाभलिन नसकिएला । घरजग्गाको कारोबारबाट फाइदा मिल्नेछ भने वर्षको उत्तरार्धमा निर्माण र पर्यटकीय क्षेत्रको लगानी फलदाई हुनेछ । वाहन तथा दलाली व्यवसायीलाई मनग्य फाइदा होला । शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरू चैं सचेत रहनुपर्छ । बैशाख र पौष महिनामा धनमाल हराउन सक्छ सजग रहनु होला । आर्थिक दृष्टिकोणले साउन, कार्तिक, र फाल्गुन महिना शुभ रहनेछन् ।
प्रेम सम्बन्धमा पारिवारिक उल्झन आउन सक्छ । प्रेमी जोडीमा मतभेद बढ्न सक्छ अत: प्रेम जीवनमा समस्या आउनसक्छ, त्यसैले विचार गरेर मात्र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ । असार महिनामा प्रेमी र प्रेमिकाका घर परिवारबाट केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि सिर्जना हुनसक्छ । साउन महिनामा नयाँ व्यक्तिसँग नयाँ सम्बन्धको सुरुवात हुन सक्छ । आफन्त, दाजुभाइ तथा घरपरिवार सँगको विवाद भने समाप्त हुनेछ ।
वर्षको सुरुमा शैक्षिकक्षेत्र त्यति राम्रो नरहला मङ्सिरबाट भने सफलता मिल्नेछ । आई. टी. र वाणिज्य विषयका विद्यार्थीहरूलाई विशेष लाभ मिल्नेछ । व्यवस्थान, टेक्निकल र भाषाका विद्यार्थीहरूलाई भने यो वर्ष कमजोर सावित हुनसक्छ । शैक्षिक क्षेत्रबाट साउन र मंसिर महिनामा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
नयाँ कार्यको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिले धेरै कुराको हेक्का राख्नु पर्नेछ । संयुक्तरुपमा गरिएको लगानि फलदायी नहुन सक्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीको जागिरमा बढोत्तरी तथा पदोन्नति हुने योग छ । पत्रकारिता, चालक र पहिरन पेसामा आवद्ध व्यक्तिहरूलाई अधिक सफलता मिल्नेछ । तर यो बर्ष वैदेशिक रोजगारीको लागि भने त्यति राम्रो हुने देखिन्न ।
यात्रा गर्दा वा गाडी चलाउँदा चोटपटकको भय छ र खानपिनमा पनि विचार पुर्याउनु आवश्यक छ । शरीरले दु:ख पाउने र घर परिवारको स्वाथ्यमा थप खर्च बढ्नेछ । नसा तथा धातुमा मस्यापनि बढ्न सक्छ, त्यसैले स्वास्थ्य प्रति सचेत रहनु होला ।
मिथुन राशिका जातकका लागि समग्रमा २०७८ साल शुभ फलदायी रहनेछ । बृहस्पतिको प्रभावले वर्षभरी नै दशमस्थान बस्ने हुँदा भाग्यमा वृद्धि हुनेछ । आँटेको र गरेको कार्यबाट सफलता मिल्नेछ । आर्थिक र वैदेशिक क्षेत्र पनि सबल हुनेछ । शनि ग्रह कमजोर हुनेलाई भने शनि अढैयाको प्रभावले आरोपप्रत्यारोप, धनहानी, कार्यमा ढिलासुस्ती, आर्थिक नोक्सानी जस्ता फल भोग्नु पर्नेछ ।
वैदेशिक लगानी र वित्तीय संस्थामा गरेको लगानीबाट निकै सफलता मिल्नेछ । स्वास्थ्य व्यवसायबाट प्रसस्त फाइदा मिल्नेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट पनि राम्रो प्रतिफल पाइनेछ, तर शेयर बजार र धातु जन्य सामानको व्यवसायबाट नोक्सानी हुन सक्छ । श्रावण र कार्तिक महिनामा हानी हुनेछ भने भाद्र र मंसिर महिनामा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
यो वर्ष प्रेम प्रसङ्गगका लागि सामान्य रहेको छ अतः प्रेममा सफलता प्राप्तगर्न धैर्य र सत्यताको आवश्यक पर्दछ । कसै कसैले जन्मकुण्डलीमा गण गुण राम्रो हुन गाएमा प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न सकिन्छ ।
स्वदेश तथा विदेश पढ्न गएका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रबाट सोचे अनुरूप सफलता नमिल्नसक्छ । विज्ञान र कृषि विषयका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सफलता मिल्नेछ, तर असार र चैत्र महिनामा विद्या र बुद्धिमा ह्रास आउनसक्छ ।
नयाँ जागिरको अवसर मिल्नेछ र वैदेशिक रोजगारको सम्भावना पनि रहेको छ । प्राविधिक क्षेत्रका पेसाकर्मीहरूले राम्रो सफलता हात पर्नेछ । राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रबाट ख्याति कमाउन सकिनेछ ।
रक्तसञ्चारमा र वायु विकारले समस्यामा पार्न सक्छ । टाउको तथा आँखाको समस्या पनि बढ्नसक्छ । परिवारको स्वास्थ्यमा धन खर्च बढ्नसक्छ ।
प्रत्येक शनिवार शिवजीको दर्शन एवं पूजा गर्नाले ग्रहपीडा कमभई शुभ फल मिल्नेछ । निमुखा प्राणीलाई खानेकुरा दिने र मान्यजनको आशीर्वाद लिनाले राम्रो हुनेछ । भैरवजीको दर्शन / पूजा गरि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ । कुनै शुभ कर्म गर्नपूर्व या यात्रामा जानु अघि शिवजीको स्मरण गर्नाले राम्रो हुनेछ ।
कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरू का लागि २०७८ साल मिश्रित फलदायी रहनेछ । बृहस्पति, शनि र केतुको प्रभावले वर्ष भरिनै आफ्नो अनुकूलताको फल नमिल्नसक्छ र गरेको कार्यमा उल्झन र चोटपटकको भए पनि रहनेछ, तर नयाँ कार्य प्राप्ति र मानसम्मान र पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । यदि जन्म कुण्डलीमा उच्च तथा स्वगृह, मित्रगृह ग्रहहरू भए अधिक शुभफल मिल्ने निश्चित छ ।
व्यापार वा व्यावसायिक दृष्टिले एस वर्ष उत्कृष्ट फल मिल्नेछ । नयाँ लगानीको अवसर र नयाँ व्यक्तिसँग व्यवसाय सुरु गर्न सकिनेछ । शेयर बजारमा गरेको लगनीले पनि सफलता दिलाउनेछ । तर जग्गा जमीन र मेसेनरी वस्तुमा गरेको लगानीले सफलता नमिल्न सक्छ । नगद सापटी पनि नगरेकै राम्रो हुनेछ । व्यवसायीक दृष्टिले जेठ, असोज र माघ महिना फलदायी हुनेछ ।
प्रेमी / प्रेमिकाका घर परिवारबाट समर्थन जनाउनेछन् र सम्बन्ध विवाहमा परिणत हुन पनि सक्छ, तर जन्मकुण्डलीमा सप्तम भाव कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई भने प्रेममा केही अप्ठ्यारा परिस्थितीको सामना गर्नु पर्ला ।
जागिरे हरूलाई सरुवा र बडुवा हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारमा लागेकालाई पनि राम्रै हुनेछ, तर सामूहिक व्यवसायमा खासै राम्रो हुनेछैन । सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा जनताले असमर्थता जनाउन सक्छन् ।
सिंह राशि हुनेहरूको लागि यो शुभ नै रहनेछ । वर्षभरि नै बृहस्पति र राहुको प्रभावले अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति मिल्नेछ । रोकिएका अधुरा कार्यले पूर्णता पाउनेछ । घर परिवारमा माङ्गलिक कार्यको आयोजना हुनेछ । तपाईंको राशिबाट बृहस्पति सातौँ भावमा रहनाले नजिकैका व्यक्तिबाट भरपूर साथ र सहयोग मिल्ने र विजय प्राप्त हुनेछ ।
व्यापार वा व्यावसायिक दृष्टिले यो वर्ष निकै राम्रो रहनसक्छ । इलेक्ट्रोनिक र शैक्षिक क्षेत्रको कारोबारबाट भनेजस्तो आम्दानी गर्न सकिनेछ, तर जग्गा जमीनको काममा भने विवाद बढ्न सक्छ । वैदेशिक क्षेत्रमा लगानीका लागि समय राम्रो छ । सेयर बजारमा भने त्यति राम्रो नहोला । आर्थिक दृष्टिले जेठ, कार्तिक र माघ महिना बढी सकारात्मक हुनसक्छ ।
शिक्षाको लागि यो वर्ष सफल र फलदायी नै रहने भएकाले राम्रो नतिजा पाइनेछ । लेखपढको लागि विदेश जाने योग पनि छ । चिकित्सा र आई. टी.का विद्यार्थीहरूलाई पढाईलेखईमा बढी सफलता मिल्ने देखिन्छ ।
यो वर्ष नयाँ रोजगार वा व्यवसायको सुरुवात हुने राम्रो योग रहेको छ । वैदेशिक, राजनैतिक तथा कूटनैतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई निकै राम्रो हुनेछ, तर अपजसको सामना भने गर्नुपर्ला ।
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले वर्षको सुरुमा चोटपटक र अस्पताल सम्मको यात्रा गर्नुपर्ला । घरपरिवारको स्वास्थ्यमा पनि खर्च बढ्नेछ । शीर्ष पीडाका साथै नशा सम्बन्धी समस्या बढ्ने भएकाले आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला ।
मंगलबार गणेशजीको दर्शन, उपासना र आरधना गरि गरेको कार्यबाट अधिक लाभ मिल्नेछ । प्रत्येक मंगलबार गणेशजीलाई सिन्दूर चढाउनाले र असहायलाई सहयोग गर्नाले ग्रहपीडा कम हुनेछ । वृक्षारोपण गर्नाले पनि ग्रहवाधा कमहुने । कुनै शुभ कर्म गर्नपूर्व या यात्रामा जानु अघि गणेशजीको स्मरण गर्नाले राम्रो हुनेछ ।
तुला राशि हुनेहरूकालागि २०७८ साल मध्यम रहनेछ । देवगुरु वृहस्पतिले शुभ फल दिनेछ । यसको प्रभावले आकस्मिक लाभ, सन्तान सुख, घरमा शुभकार्य र धार्मिक यात्रा समेत हुनेछ, तर अढैया शनि, राहु र केतुको प्रभावले भने आरोप प्रत्यारोप, मानशीक चिन्ता र ईज्जत प्रतिष्ठामा ह्रास आउनसक्छ । जन्म कुण्डलीमा शनि राम्रो हुनेहरूलाई भने वैदेशिक कार्यबाट राम्रो सफलता मिल्नेछ ।
प्रेम/सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा मतभेद र विश्वासमा कमी देखिनसक्छ । आफन्त र नजीकका व्यक्तिबाट टाढिनु पर्ला । वर्षको अत्यामा भने प्रेम सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ र घरपरिवारबाट टाढिएकाहरू नजिकिनेछन् । सन्तानको रहर गर्नेले सन्तान सुख मिल्ने सम्भावना पनि रहेकोछ ।
मकर ( भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख, खि,खु,खे,खो,गा,गि )
२०७८ साल कुम्भ राशि भएका व्याक्तिहरू सामान्य रहनेछ । घरमा शुभ र मङ्गल कार्यको आयोजना हुनेछ । रोकिएका वैदेशिक क्षेत्रका कामहरू सहजै अघि बढ्नेछ । शनिको आद्य साढेसाति, राहु, र वृहस्पतिको प्रभावले झुटा आरोप, वादविवाद, डर र चिन्ता बढ्न सकछ, तर जन्म कुण्डलीमा शनिग्रह राम्रो पोजिसनमा भए शनिदेवले उच्च पद, प्रतिष्ठा र शुभ फल दिनेछन् ।
मीन राशि हुनेहरूका लागि २०७८ साल शुभदायी नै रहनेछ, वर्ष भरीनै गोचर गर्ने राहु र शनिको कारणले वैदेशिक कार्य राम्रो हुनेछ, तर स्वदेशको कमाईले व्यवहार धान्न गारो पर्ला । कसै कसैलाई अकस्मात् सफलता मिल्ने र भाग्यमा वृद्धि हुनेछ । बृहस्पति र केतुको कारणले गरेको कार्यमा ढिलासुस्ती हुने र बुद्धि पनि कमजोर रहनेछ, यदि जन्म कुण्डलीमा बृहस्पति उच्च, स्वगृह, मित्रगृह भए शुभफल मिल्ने निश्चित छ ।
यो वर्ष आर्थिक पक्ष सबल नै रहने देखिन्छ । उधारो र पुरानो ऋण तिर्न सकिनेछ, तर आय भन्दा व्यय बढ्नेछ । सेयरको कारोबार भने सूझ बुझमा भर पर्छ । स्वास्थ्य तथा हार्डवेयरको व्यवसाय फस्टाउनेछ । प्राविधिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट पनि राम्रो प्रतिफल पाइनेछ, तर खाद्यान्न र कृषि व्यवसायबाट नोक्सानी हुन सक्छ । वैशाख र असोज महिनामा हानी हुनेछ भने जेठ, भाद्र र माघ महिनामा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
सम्बन्ध सामान्य नै रहनेछ । वर्षको पूर्वार्धमा प्रेम प्रसङ्गमा नपरेकै राम्रो हुनेछ, अत: विवाद बढ्न सक्छ । वर्षको उत्तरार्धमा भने प्रेमी / प्रेमिकाका बिच समझदारी बढ्ने र सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुनेछ । आफ्नो कार्य क्षेत्रका सहकर्मीसँग भने मनमुटाव बढ्नसक्छ ।
यो वर्ष विशेषगरि कला, साहित्य र मनोरञ्जन विषयका विद्यार्थीहरूले उत्कृष्ट नतिजा पाउनेछन् । रोकिएका अधुरा विषयमा पनि उत्तीर्ण हुन सकिनेछ । वैदेशिक विद्यार्थीहरूले भने अलि बढी मिहिनेत र संघर्ष गर्नु पर्ला । शैक्षिक क्षेत्रबाट असार र चैत्र महिनामा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो वर्ष नयाँ ठाउँमा लगानीको अवसर मिल्नेछ भने नयाँ कार्य, पद र प्रतिष्ठा समेत पाइनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिनेछ । कलाकारिता र प्राविधिक पेसामा आवद्ध व्यक्तिहरूको लागि निक्कै राम्रो हुनेछ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू लाई भने त्यति राम्रो हुनेछैन ।
यो वर्ष रक्तचाप र हृदय, नशा र हड्डीको समस्या पनि बढ्न सक्छ । अत: स्वास्थ्यप्रति सजग रहनु होला । छाला तथा प्रजनन समस्या हल हुनेछ ।
पहेँलो, निलो, खैरो, कालो र गुलाबी शुभ रङ्ग हो ।
भगवान श्रीकृष्ण र लक्ष्मीजीको दर्शन, पूजा, आरधना, पाठ गरनाले राम्रो हुनेछ । केतु र बृहस्पतिको शान्ति, जप, पाठ र पूजा गराउने ग्रह पीडा कम हुनेछ । सत् मार्गमा हिड्ने र सत्य बोल्नेलाई भगवानको आशीर्वाद प्राप्त भई भाग्यमा वृद्धि हुनेछ ।
© ज्यो.प. नारायणप्रसाद दुलाल
१ बैशाख २०७८, बुधबार १०:५४ मा प्रकाशित